Enyocha Guangxi New Foreign Trade Incubation Base G&M
Na Machị 28, ninglọ Ọrụ Na-ahụ Maka Ofesi Ofesi na-ahazi ndị Consulate Generals nke mba isii ASEAN na Nanning na Onye Mmekọrịta Office nke Hong Kong Special Administrative Region Government na Guangxi iji nyochaa Guangxi Foreign Trade Incubation Base na ...
Obi ọmịiko maka afọ ise gị - G&M 2020 ịja mma Conference e ọma ịga nke ọma
Ememme onyinye 2020 bụ afọ pụrụ iche. Na ụbọchị imeri ihe isi ike ọnụ, G&M ga-arapara n’ibu ọrụ ya na ọrụ mmekọrịta ya. N'ụbọchị arụsi ọrụ ike, anyị enwetala ọgụgụ isi na rụzuru. Ndi niile ...
Taa, General Manager Chen Zhifeng, onye na-ahụ maka Guangxi New Foreign Trade Incubator Base, nwere nzukọ nchịkọta nke GUANGXI G&M GLOBAL ENTERPRISE MANAGEMENT CO., LTD.in 2020. N’afọ pụrụ iche nke 2020, ụlọ ọrụ anyị meriri mmetụta ọjọọ ahụ. nke C ...
Obi ụtọ ụbọchị ọmụmụ na ebe mmalite anyị.
Ndewo, everyone.We e-elekwasị anya na anụ ụlọ diamond hụrụ UM UM UBARA nke gara aga 30 afọ, dabere na elu àgwà ngwaahịa na ọrụ, anyị merie ihu ọma nke anyị na-eji ọkụ. ...
Ngwa atụmanya nke diamond egweri wheel na nkume nhazi
Enwe nke ihe okike e ji wuo ya ma chọọ ya mma dị iche maka ọtụtụ mba nwere nnukwu nchekwa nke akụrụngwa. Ruo ugbu a, ọtụtụ mba ndị na-emepụta okwute pere mpe ejirila maka oriri obodo, mana ọ bụghị ahịa mbupụ. N'ime afọ ndị na-adịbeghị anya, ụwa ma ...